Saab iibkeedii oo dhameeystirmey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Farriin muhiim ah oo ku socota reer Gävle xaafadaha Hemlingby, Sörby, Andersberg iyo Hemsta.
Saab nu Spykerägt
Saab iibkeedii oo dhameeystirmey
La daabacay onsdag 24 februari 2010 kl 15.05
Galabnimadii talaadada ayey heshiiskii ugu danbeeyey saxiixdey shirkadda yar ee Spyker cars oo laga leeyahay dalka Holand oo ay ku wareegeeyso mulkiilanimada Saab automobile,taas oo soo afjareeysa 20 sano oo ay shirkadda General motors ku laheeyd shirkaddaas Iswiidhishka ah ee baabuurta sameeysa.
3 500 oo ah shaqaalaha Saab ee magaalada Trollhättan ayaa heley fursad kaloo cusub oo ay shaqadooda ku sii wadanayaan ka dib markii muddo lagu handadayey shaqo ka cayrin iyo gabi ahaanba in shirkaddaas Saab albaabada loo laabayo.
Dhanka kale safarka Saab sugayaa ma ahan mid sahlan.
haddii aysan si dag dag ah kor ugu qaadin wax soo saarka iyo iibinta noocyo cusub oo buubuurteeda ah waxaa mar labaad dib ugu soo noqoneeysa handadaadii xiritaanka shirkaddaas.
wali waxaa su'aalo la iska weeydiinayo sida shirkadda Spyker iyo agaasimeheeda guud Victor Muller ay u soo dhameeystiri karaan dhaqaalaha ay Saab ku iibsadeen.
Qiimaha Saab lagu iibsadey ayaa dhan 2.8 milyaardar oo karoon .
Inta badan lacagta iibku oo ah 2.3 milyaardar oo karoon ayaa ahaan doonta saami ay yeelaneeyso shirkadda cusub ee Spyker-Saab .500 oo malyan ayaa kaas lagu bixinayaa.General motors ayaana la siiyey labameeloodow saddex .Qiyaastii 175 malyan ayaan la bixindoonaa mustaqbalka ,waana lacagtaas tan aan caddeeyn bixinteedu laakiin taasi wax walwal ah kuma hayso madaxa saab automobile Jan Åke Jonsson:
"Maya ,sida Viktor Muller uu marar badanba sheegey waxaa jira meelo kala duwan oo la kala dooran karo lagan xulanayo kooda dhaqaala ahaan ugu fiicnaada ,lacagtaana bixinteeda la iskama rabo inta ka horeeysa bisha luulyo,waana taas tan wax walwal ahi ii heeyn."ayuu sheegey Jan Åke Jonsson.
Viktor Muller ayaa xiriir ganacsi la leh maalqabeenka ruushka ah ee lagu magacaabo Valadamir Antanov kaas oo maalgalin dhaqaale oo weeyn gashey shirkadda Spyker cars.
Laakiin shirkadda general Motors iyo waliba dawladda Iswiidhan ayaa sheegey in aysan rabin in ninkaani wax rad ah ku yeesho mulkiilanimada shirkadda Saab.
Sidaas ayeyna hadda wax u dhaceen,laakiin sidaas oo ay tahayna dad dhaqaalaha indha indheeya ayaa sheegey in Antonov uu door aad iyo aad muhiim u ah ka cayaari doono mustaqbalka Saab.
dawladda Iswiihan ayaa hadda damiin ka noqotey deyn dhan 4 milyaardar oo karoon oo laga qaadey bangiga maalgalinta ee yurub ,deeyntaas oo loo adeegsan doono in lagu hormariyo farsamada u fiican deegaanka iyo baabuurta laakiin aan loo adeegsan karin daboolidda khasaaraha.
Hadda markii ay meesha ka baxdey handadaadii lagu xirayey saab waxaa ilaa saddex ama afar usbuuc gudahood la filayaa in la bilaabo moodeelo cusub oo baabuur ah oo uu ka mid yahay nooca 9 xariijin 5.ka dibna waxaa sidoo kale bilaabmaya suuqgeeynta iyo iibinta baabuurta saab.
Qorshaha iib oo uu soo gudbiyey Victor muller markii uu gadanayey shirkadda saab ayaa ahaa mid hididiilo leh.
Hoos u dhacii xooga lahaa ee sanadii hore ku yimid iibka baabuurta saab kaas oo dhammaa 40 000 oo gaari ,ayaa saab waxaa qorshaha ugu jira in ay iibiso sanadka 2012-ka ilaa 100 000 oo gaari laakiin dadka arrintaas ka biya diidani waxay tilmaamaan in saab ay khasaara ku jirtey labaatankii sanoo la soo dhaafey.
Sidaas daraadeed su'aalo badan ayaa dulheehaabaya xarunta Saab ee magaalada Trollhättan.